Mitaingina soavaly | Soavaly Noti
Araka ny efa nolazainay, dia misy maro fifehezana fanatanjahan-tena mpitaingin-tsoavaly, eo anelanelan'izy ireo mitaingina, na dia toa mitovy amin'ny safidy hafa aza izy io, dia misy ny fahaizana mitazona ny fifehezana tsara ny soavaly, ankoatry ny fahalalana ny fomba hitantanana azy, mitaingina milaza ny fahalalana ilaina hikarakara ny soavaly sy ny fampiasana ireo fitaovana tsy maintsy ampiasainay.
Amin'ity habaka ity dia afaka mahita ny zava-drehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny soavaly sy soavaly ianao. Tsy azontsika hadinoina fa fanatanjahantena io mitaky be dia be ary tokony hikarakara tsara ny bibinay izahay, miaraka amin'ny fitaovana tsara sy sakafo tsara mba hahafahan'ny soavaly manao tsara araka izay tratry ny heriny, ankoatry ny fisian'ny mpitsabo biby, mba tsy hanana olana tsy azo sitranina ny bibinay.
Ny mitaingina dia asa fanatanjahan-tena izay iasan'ny mpitaingina faritra ara-batana maro. Manampy amin'ny feo hozatra, hitazomana ...
Fomba hianarana mitaingina soavaly
ny Carlos Garrido hace 5 taona .
Ny soavaly dia iray amin'ireo biby mandoto indrindra ary efa nifanaraka tamin'ny fiainana tamin'ny ...
Ny lesona voalohany mitaingina anao
ny Angela Graña hace 8 taona .
Ity no ho lesona voalohany mitaingina anao. Angamba efa nitaingina soavaly ianao taloha, rehefa antitra ianao ...
Rider Fitness: Fanatanjahan-tena amin'ny tongotra
Ny mitaingina, ivelan'ny heviny manokana, dia fanatanjahantena. Ary raha tsy izany, lazao amiko ...
Fiomanana ara-batana mpitaingina
Ny mpitaingina matihanina dia mety tsy maintsy mitaingin-tsoavaly maro ao anatin'ny iray andro, ary tsy tapaka. Ary na maro aza ...
Fanafanana ny soavaly alohan'ny fotoam-pampiofanana (I)
Tahaka antsika ihany, alohan'ny hampiharana fanatanjahantena dia tsy maintsy mandroso sy mihetsika kely isika, tsy maintsy manao toy izany koa ilay soavaly….
Ny vavahady fanampiana sy ny loza aterany (III): ny chambón
Ny chambón dia karazan-java-bary fanampiny iray izay azontsika antsoina hoe iray amin'ireo safidy malemy kokoa. Misy…
Ahoana no hifehezana soavaly mitebiteby nefa tsy manandrana (V)
Fanesorana amin'ny fametrahana ny lohan'ny soavaly
Androany isika dia hiresaka momba ny fanapahana fifanarahana, na hoy i Juan Francisco F. Muñoz "nanery ny jiro". Ilay "tsy vita fifanarahana!" Eny…
Ny loza ateraky ny soavaly
Marina fa avy amin'ity bilaogy ity dia mamporisika ny olona hiditra amin'ny mitaingin-tsoavaly isika na ao anatiny ...